Jilaagii reer Sweden Janne Loffe Carlsson oo ku geeriyooday 80 jir - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jilaagii Janne Loffe Carlsson oo ku geeriyooday 80 jir.
Jilaagii reer Sweden Janne Loffe Carlsson oo ku geeriyooday 80 jir
Rafael Edholm: Maalinta waa maalin murugo
La cusbooneeyay torsdag 31 augusti 2017 kl 10.28
La daabacay torsdag 31 augusti 2017 kl 08.57
Jilaaga iyo muusik-yahanka Janne Loffe Carlsson oo geeriyooday, sida ay sheegtay saaxiibtiis oo warrameeysay laanta idaacadda ee P4 Kristianstad.
Janne Loffe Carlsson ayaa ku geeriyooday da’da 80 jir xannuun muddo hayay dabadii. Carlsson ayaa kula dhaqnaa saaxiibtii magaalada Öllsjö oo dhacda duleedka magaalada Kristianstad 15-kii sannadood ee ugu dambeeyey.
Janne Loffe Carlsson wuxuu ku dhashay magaalada Stockholm sannadkii 1937. Masraxa jilaanimada wuxuu ku soo galay Anderssonskans Kalle 1950. Isagoo wixii intaa ka dambeeyey ka soo muuqday aflaan kalaasik ah sida Repmånad, Smugglarkungen iyo Göta Kanal. Wuxuu aflaanta qaar la jilay Allan Edwall ee filinkii Vem älskar Yngve Frej.
Magaca Janne Loffe Carlsson wuxuu ku caan baxay jiliddii Någonstans i Sverige ee filimkii musalsalka ee idaacadda la iska daawado ee 111:an oo uu ku jilayay magaca Elof Olsson "Loffe".
Kuleeylihii ina dhaafay ayuu qayb ka qaadan lahaa barnaamijka farsen Rent mjöl i påsen, hase yeeshee di buga laabtay xaalado u gaar ah daraaddood.
–Aad ayaan uga xumaaday. Wuxuu ahaa shakhsi aad u wanaag-san. Miskiin ah, naxariis badan oo wax walba dadka u qabta. Wuxuu sidoo kale ahaa farshaxan dhinacyo badan, sida uu sheegay soo saaraha masraxyada iyo saaxiibkii Björn Forsberg.
–Midda aan lagu iloobi doonin Janne waxay tahay inuu ahaa jilaa daran oo ay howshu dhab ka tahay. Ma uusan ahayn oo keliya shaactiroole. Wuxuu sidoo kale sameeyn jiray farshaxanka sawirrada oo qaar ka mid ah ey iminka derbiyada guriga ii suran yihiin, sidoo kale wxuu ahaa muusishan dhab ah. Intaa waxaa dheer inuu ahaa saaxiib dhab ah, sida uu laanta P4 Kristiantad u sheegay Björn Forsberg.
Janne Loffe Carlsson wuxuu sidoo kale ahaa ruux hibo u leh muusikada, wuxuuna ka mid ahaa kooxda Hansson & Karlsson. Waxaa lagu sumadeeyay inuu ka mid ahaa dadka ugu hibada badan ee durbaan garaacidda, isagoo la soo ciyaaray kooxdii gitaariistihii caanka ahaa Jimi Hendrix iyo saksafoonistihii Dexter Gordon.
–Maanta waa maalin murugo, sidaa waxaa yiri Rafael Edholm, oo ey soo wada jileen Göta Kanal. Janne wuxuu qayb kaga jiraa ruuxa bulshada Sweden.